लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको वास्तविकता : यस्तो छ भौगोलिक दूरी ! - Purbeli News
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको वास्तविकता : यस्तो छ भौगोलिक दूरी !
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७ समय: ७:५०:५४
काठमाडौँ : भारतले चीनको मानसरोवर जोड्न कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङसम्म एकतर्फीरुपमा सडक नै बनाएर उद्घाटन गरेपछि मात्र यसबारेमा नेपालले थाहा पायो । त्यसपछि भने दशकौँदेखिको नेपाल–भारत सीमा विवाद् थप सतहमा आएको छ ।
भारतको उक्त कदम आफूहरुलाई मान्य नभएको भन्दै सरकारले वैशाख २८ गते यहाँस्थित भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्रामार्फत भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो । गत कात्तिकमा भारतले उक्त क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१५ मे १५ मा नेपालसँग सोध्दै नसोधी नेपालको भूमि हुँदै दुई देशबीच वाणिज्य तथा व्यापार अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा पनि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो ।
नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने भन्दै गठन गरिएको इमिनेन्ट पर्सन्स् ग्रुप (इपिजी)को प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारत तयार देखिएको छैन । नेपाल सरकारले त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गर्न र त्यसको अन्तरवस्तुमा रहेर समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।
सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र आफ्नोमा पारेको थियो । सो नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले नोभेम्बर ६ मा कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको कदमको विरोध जनाएको थियो ।
सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धका बेला आफ्नो क्षेत्र जोगाउन भारतले नेपालको अनुमतिमा सेना राखेको बताइन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको समयमा १७ स्थानमा सेनाको चौकी राखिएको सीमाविद्को भनाइ छ । चौकी लिपुलेकबाट १० किलोमिटर वर तिङ्करसम्म ल्याइएको थियो ।
पछि १९७० ताक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले १५ वटा चौकी हटाउन सफल भएपछि तिङ्करको चौकी कालापानीमा गएर बसेको विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालले पनि विसं २०२९ देखि २०३१ सम्म कालापानीमा भारतीयको गतिविधि नियाल्न दार्चुलाको तिङ्करमा प्रहरी चौकी निर्माण गरेको थियो ।
बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका–४ का वीरबहादुर चन्दका अनुसार शुरुमा १५ जना सुरक्षाकर्मी भए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारले ध्यान नदिँदा सीमा अतिक्रमण भएको हो । भारतले मिचेको ठाउँको कर तिरेको मोठ बैतडीको मालपोतमा अहिले पनि रहेको बताइन्छ ।
चन्दका अनुसार पहिले दार्चुला जिल्लाको मालपोत पहिले बैतडी मालपोतमा बुझाइन्थ्यो । शुरुमा राखिएको चेक पोष्टलाई व्यवस्थित बनाएर सुरक्षाकर्मी थप्दै जानुपर्नेमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको हो ।
नेपालको क्षेत्रलाई सन् २०१५ मे १५ मा आफूखुशीरुपमा भारत र चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी ४१ बुँदे सम्झौता भएपछि भने विवाद थप बल्झिएको थियो । त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले तत्कालै कूटनीतिक नोटसमेत दुवै देशलाई पठाएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । तर सरकारले आफ्नो सिमानाको विषयमा गम्भीर कदम चाल्न नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको सीमाविद्को भनाइ छ ।
कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने विषयमा सन् १८१६ देखि १९९३ सम्मको नक्साले प्रष्ट पार्ने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उल्लेख गर्नुहुन्छ । सो क्षेत्रमा भारतले एसएसवीसहित इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ गरी दैनिक हेलिकप्टर गस्ती गर्दा नेपालका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसमेत नहुनु भने विडम्बना हो ।
यस्तो छ वर्तमान अवस्था !
नेपालको सीमा क्षेत्रमा भने सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति त परैको कुरा स्थानीय नागरिकको उपस्थितिसमेत कमजोर छ । वर्षमा ६ महिना हिउँपर्ने भएकाले सबै बेँसी झर्छन् । त्यसपछि नेपालको भूभाग बेवारिसे जस्तै हुन्छ ।
त्यही शून्यताको फाइदा उठाएर भारतले अतिक्रमण गर्न सफल भएको रासस समाचारदाताको स्थलगत अध्ययनको तथ्यले पुष्टि हुन्छ । छाङ्रुमा बस्ती नभएको भए त्यो क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गरेर सीमानाका तिङ्करसम्म ल्याउन सक्थ्यो भारतले । छाङ्रुमा ११५ परिवारको बसोबास रहेकाले सो क्षेत्रमा सुरक्षित छ ।
द्वन्द्वकालअघि दार्चुलाको छाङ्रुसँग जोडिएको सीमानाका सीतापुल नजिकै प्रहरी चौकी थियो । शान्ति स्थापनापछि यहाँको नीतिकुण्डामा प्रहरी चौकी छ । चौकी पनि ६ महिनामात्रै बस्छ । त्यहाँको नेपाली प्रहरी ६ महिना तल आएर बस्ने गरेको छ ।
मुख्यगरी भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र छाङ्रुबाट १० किलोमिटर पर गुञ्जी दोभान हो । त्यो दोभानमा लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली नदी र लिपुलेकबाट कालापानी हुँदै आएको लिपु खोला मिसिन्छ ।
त्यही लिपुखोला (कालापानी नजिकको मूल) लाई काली नाम दिएर भारतले त्यसबीचको समग्र भूभागलाई अतिक्रमण गरेको हो । यद्यपि तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदी नै सिमाना हो भन्ने कुरा सुगौलीसन्धि पछिको तथ्य र प्रमाणले देखाउँछ । यसअघि सरकारको दरियो प्रयास हुन नसक्दा समस्या बल्झिएको स्थानीयवासी जितबहादुर बोहरा बताउनुहुन्छ ।
सरकारले हालै लिपुलेक कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको केहीअघि वैशाख ३१ गते सरकारले यहाँको सीमा क्षेत्रमा पर्ने छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २५ जनाको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) स्थापना गरेको छ ।
सो क्षेत्रमा सशस्त्रको गुल्मकै रुमपा विकास गर्ने गरी काम थालिएको छ । हालसालै सरकारले गरेको दुई महत्वपूर्ण निर्णय ऐतिहासिक भन्दै सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । यहाँ २१ जना प्रहरीलाई पु¥याएर चौकी पनि पुनःस्थापन गरिएको छ । नेपाली सेनाले समेत सूक्ष्म अध्ययन थालेको छ ।
सीमा जोगाउन यो प्रयासले मात्र पुग्दैन । नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा तैनाथ नगरेसम्म नेपालको शिर उँचो हुँदैन । त्यसका लागि हाल विवादित बन्न पुगेको नेपाली भूभागमा भारतको सुरक्षा फौज रहेकाले एकैपटकमा नेपाली सुरक्षाकर्मी पु¥याउन कठिन छ । कूटनीतिकरुपमा छलफल र वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सुरक्षा विज्ञ तथा गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा डा इन्द्रजित राई सरकारले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको निगरानी बढाउनु महत्वपूर्ण कदम हो भन्नुहुन्छ । पुरानो सीमा विवाद भएकाले कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
सीमाका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आउनुभएका रतन भण्डारीका अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको पुष्टि गर्ने आधार इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्वे अफ इण्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा हुन् । उहाँका अनुसार कालीनदीको दक्षिणी भागमा गोग्रा अमर लेखिएको छ ।
नक्साको बीचमा महाकालीलाई ‘काली आर अर बेस्टर्न ब्रान्च अफ द गोग्रा अफ सर्जु’ लेखिएको छ भने सुगौली सन्धिको तीन वर्षपछि सन् १८१९ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको सर्वे कार्यालयबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदीलाई काली आर भनिएको छ । यी तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको भूमिमाथि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
यस्तो छ भौगोलिक दूरी !